समाचार र समाज, मौसम
यो राम्रो आत्माको जब विन्डो वर्षा बिरालोहरु र कुकुर मा रहन गाह्रो छ। ती दिन, यो देखि प्राण अझ दुःखी हुन्छ सारा संसार खैरो को रंग मा repainted थियो देखिन्छ, र। यदि खराब मौसम मात्र बाहिर, तर पनि भित्र rages, आशा को पनि शुरुवात हत्या रूपमा।
अर्डर निराश प्राप्त गर्न, तपाईंले कुरा आफैलाई लिनु आवश्यक, तर खराब मौसम मा के गर्न? आखिर, सामान्य छुट्टी गन्तव्यहरू अधिकांश उपलब्ध यो समयमा तिनीहरूले बाहिर भएकोले हो। र कतै जाने क्रममा, तपाईं स्पष्ट योजना छ, अन्यथा तपाईं शक्ति majeure मा प्राप्त गर्न सक्छन् आवश्यक छ।
मुख्य कुरा - हृदय गुमाउनु छैन
यो जीवन को अन्त हो - वर्षा वा हिउँ किनभने तर, निराश गर्छन्। पनि सबैभन्दा फोहर मौसममा, तपाईं मनोरञ्जन पाउन सक्नुहुन्छ। यसबाहेक, कहिलेकाहीं पनि यो कारक राम्रो समय योगदान पुग्छ। त्यसैले, खराब मौसम मा के गर्न?
पहिलो चरण योजना बनाउन छ, तर यो क्रममा आफ्नो विचार ल्याउन आवश्यक छ। भूल सडक पग्लदै गरेको हिउ छ भन्ने तथ्यलाई र माटोको बारेमा, यो विचलित हुँदैन। गरिब राम्रो भन्दा राम्रो महसुस गर्न मद्दत गर्छ भनेर नबिर्सनुहोस्। त्यो न्यानो कोठा मा सडक भन्दा खत्तम, त्यसैले सुखद छ। त्यसैले, यो यस्तो ठाउँ पालन गर्न आवश्यक छ।
र एक सानो मुड सुधार मात्र पछि, तपाईं प्रश्न, सीधा जानु पर्छ "चिसो मौसम मा सप्ताह मा के गर्न?"
मेरो घर - मेरो गढ
त्यसैले, सडक मा वर्षा, जो सबै ध्यान घरेलू मामिलामा गर्न उत्तेजित गर्दछ भन्ने हो। आखिर, हामी प्रत्येक पर्याप्त समय छ, जो कहिल्यै, आफ्नै आवेग छ। उसोभए, तपाईं एक शौक आनन्द वा सुरु गर्न सक्छ जब घण्टा आउनुहोस्। त्यसैले, केही लागि यो एक सिमुलेशन, एक शिल्प वा सिलाई लेखन कसैले लागि हुन सक्छ।
इच्छा tinkering छैन भने, त्यसपछि तपाईं idleness आनन्द उठाउन सक्छौं। आखिर, यो विचार: जब अन्तिम समयमा बस भोजन सम्म ओछ्यानमा झूठ एक मौका प्राप्त भएको थियो? वा राम्रो पुस्तक केही घण्टा खर्च? यो सबै अन्तमा, बस नवीनतम चलचित्र वा टिभी श्रृंखला हेर्न? बस आराम र स्वतन्त्रता र idleness आनन्द: त्यसैले, यहाँ तपाईं सडक खराब मौसम भने, घरमा के थाहा बेला जवाफ छ।
तपाईं महसुस भने एक ठाउँमा बस्न मन
तर सबैलाई, पूर्ण idleness मा सम्पूर्ण दिन खर्च गर्न सक्छन् मात्र बाहिरी गतिविधिहरु देखि खुशी लिन सक्षम छन् जो मानिसहरू हुन्। खराब मौसम यसलाई मा गर्न कुराहरू?
खैर, पनि फोहर मौसममा, खाने प्रतिष्ठानबाट, तैयार आगंतुकों प्राप्त गर्न खुसी हुन। मात्र, तपाईंको मार्गमा अग्रिम परिभाषित गर्न बाहिर आफ्नो जोखिम कम गर्न आवश्यक छ। त्यसैले, खराब मौसम मा के गर्न:
हरेक शहर मा संग्रहालयहरु, कला ग्यालरीमा र सिनेमाहरू छन्। यी ठाउँहरू वर्षाको मौसम मा एक यात्रा को लागि आदर्श हो। पहिले, त्यहाँ सधैं न्यानो र सुख्खा छन्, र दोश्रो कुरा, यो मौसममा, त्यहाँ एउटा ठूलो ठाउँ मा चलिरहेको जोखिम समाप्त जो केही आगंतुकों छन्।
किनमेल केन्द्र अर्को वस्तु चयन मार्ग मा हुन सक्छ। यहाँ महिला लागि बुटिक, र पुरुषहरु को लागि मनोरञ्जन र छोराछोरीको खेल को मैदानों छन्।
साथै, ती दिनमा, तपाईं सुरक्षित जिम, स्पा र धूपघडी जाने गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो ठाउँमा, यो के विन्डो बाहिर जाँदै गर्नुपर्छ कुरा छैन। त्यहाँ सधैं भइरहेको छ के बाट विचलित गर्न सक्छ कि यसको आफ्नै विशेष वातावरण छ।
वर्षा दिन - एक पदयात्रा भ्रमण गर्न को लागि एक राम्रो समय
लामो नातेदार वा मित्र भ्रमण फिर्ता आउन योजना भने, खराब मौसम यो मामला मा सबै भन्दा राम्रो सहायक छ। किन? वास्तवमा, सबै ती दिनमा, शायद कसैले घर बाहिर, अतिथि हाम्रो योजना खलबल्याउन असम्भाव्य छ भ्रमण त चुनिएको छ, एकदम सरल छ।
साथै, थुप्रै अतिथि प्रसन्न हुनेछ, किनभने तिनीहरूले, सबै भन्दा संभावना पनि प्रश्न हैरान "खराब मौसम मा के गर्ने?"। तसर्थ, आदर्श समाधान स्थानीय सुपरमार्केट स्वादिष्ट खाना साथीहरूसँग फोन, प्रकार हुन र एक फैशनेबल जमघट हुनेछ।
रोमान्स साँचो प्रकृति
साथै, भिजेको मौसम मा आफ्नो चुनिएको एक आमन्त्रण गर्न राम्रो अवसर हुन सक्छ रोमान्टिक खाने। यो एक रेस्टुरेन्ट मा तालिका रूपमा प्रयोग गर्न वा खाने खाना पकाउन आफैलाई गर्न सम्भव छ। के साँचो हो, दोस्रो विकल्प वास्तवमा आफ्नो प्रेम एक साथ एक्लै एक साँझ अनुमति दिन्छ, राम्रो छ।
तपाईं खराब मौसम यो लागि रोकावट हुन सक्छ कि लाग्छ? त्यसपछि एक समय जब विन्डो drumming वर्षा मा, केही आरामदायक वातावरण न्यानो कोठा मा विजयी हुनेछ एक पल को लागि कल्पना गर्नुहोस्। र थप रोमान्टिक लागि मोमबत्ती प्रकाश र एक राम्रो ज्याज बारी गर्नुपर्छ।
खराब मौसम मा रिसोर्टमा के गर्न?
सबै भन्दा ठूलो निराशा को रिसोर्टमा एक यात्रा हुन सक्छ। थप ठीक, यदि पर्यटकहरु न्यानो घाम को सट्टा वर्षा आशा गरिन्छ। सहमत, होटल को कोठा मा एक लामो-प्रतीक्षा छुट्टी को संभावना असम्भाव्य कसैले खुसी हुनेछ।
तर तुरुन्तै निराश मा पनि अधिक त फिर्ती उडानको लागि टिकट किन्न गिर छैन, र। आखिर, पनि फोहर मौसममा, तपाईं महिमा मा एक आराम प्राप्त गर्न एक ठाउँ पाउन सक्छन्। त्यसैले, कसरी nepogoditsy बेला रिसोर्टमा आफ्नो छुट्टी रोशन गर्न?
पहिलो चरण वरपरको क्षेत्र अन्वेषण गर्न छ। अक्सर, आफ्नो क्षेत्र मा त्यहाँ विभिन्न मनोरञ्जन परिसर छन्। उदाहरणका लागि, इन्डोर पूल, मिनी-थिएटर, क्लब र रेस्टुरेन्टमा।
अर्को चरण स्थानीय पोर्ट वा bartender संग कुरा हो। त्यस्ता मानिसहरूलाई सधैं कहाँ जाने थाहा र हेर्न आफ्नो शहर मा के हुनुपर्छ।
कुनै पनि सहरमा त्यहाँ पर्यटक प्रतिष्ठानबाट, भीड मनोरञ्जन लागि डिजाइन को प्रशस्त छन्। यो घरको छानो र यति मा अन्तर्गत सर्कस, शो, पानी पार्क हुन सक्छ। आफ्नो स्थान इन्टरनेट वा पर्यटक पुस्तिका मा हुन सक्छ बारे जान्नुहोस्।
मुख्य कुरा सुरक्षा उपाय बारे सम्झना र आफ्नो स्वास्थ्य रक्षा गर्न। hypothermia सबै बाँकी खराब छ सर्दी, गर्न सक्छ किनभने।
मोन्टेनेग्रो: जलवायु मासिक औसत तापमान, विशेष गरी अवकाश र समीक्षा
नोभेम्बर मा Sharm el-शेख मा मौसम के छ? सान्त्वना मा आराम
जहाँ यसलाई नोभेम्बर मा न्यानो छ छुट्टी लागि हामी छोड्न?
यो के निर्भर देखि मास्को मा सामान्य वायुमण्डलीय दबाव?
मौसम टर्की मा महिनाको लागि। मई, जुन, जुलाई, अगस्ट, सेप्टेम्बर, अक्टोबर र अरूलाई मा मौसम।
Azamat Bishtov: युवा कलाकार को जीवनी
बजार असफलता र आर्थिक विकासमा सरकारको भूमिका
तपाईंको आफ्नै हातको लुगा लगाएर क्याप्सन: विवरण, मोडेल, संयोजन र प्रतिक्रिया
चालक को स्वचालित स्थापना। चालक स्थापना
एमिनो एसिड Bcaa। कसरी लिने?
हास्य बनाउनको लागि कार्यक्रम: तिनीहरूले के हुन्?
खुर्सानी सूप: सिमी र मासु संग नुस्खा
आलु किरा र आफ्नो नियन्त्रण
शीर्षक बीमा सम्पत्ति र यसको मूल्य। शीर्षक बीमा के हो?